mahazatra amin'ny anarana te-hihaona aminao
mahazatra amin’ny anarana te-hihaona aminao
Ny Repoblikan’i Portiogaly dia hita ao Eoropa, avy ao Andrefana Ny Iberika Peninsula, izay mitana tery esory ny tany teny amoron-ny ranomasimbe Atlantika. Izy no heverina ho ny iray amin’ny mpanankarena indrindra sy tena manankarena ny firenena ao amin’ny tontolo izao. Ny zava-bita ny tontolo maoderina dia mifamatotra akaiky amin’ny ako ny moyen âge ny fomba amam-panao sy ny fianakaviany soatoavina ireo, noho izany dia tena mahaliana ny hahafantatra ny anarana. Izy ireo dia ampiasaina mba mitaingina ny voly ny fianakaviana any ivelany indroa isan-taona, ny soa-bola dia mamela azy hanao izany. Amin’ny ankapobeny izany dia tsara toetra sy amim-pifaliana ny olona, ny fitiavana sy ny fanajana ny vahiny. Any amin’ny faran’ny herinandro mba hitsidika, na mba haka an-trano ny namana dia azo tapahina ny fomban-drazana ny zavatra fianakaviana. Noho izany dia afaka mahazo ny Fiarahana amin’ny tranonkala sy miezaka mba hahazo ny mahafantatra ireo olona ireo, ary amin’ny fotoana, na dia hanam-bady ny teny portiogey. Mba hahazoana mahafantatra tsara ny zavatra mora zavatra ny olona dia tantaram-pitiavana toetra sy ny tena mafana ny toe-pihetseham-pontsika aminy dia tsy mankaleo.
Eo amin’ny misy aingitraingitra ny vehivavy dia faly ny hamaly sy afaka mahazo azy ny kintana rehetra lanitra.
Ho azy ireo, ny vehivavy maka ny toerana voalohany eo amin’ny fiainana
Ny olon-tiany ny fitiavana ny fifandraisana eo amin’ny teny portiogey ny fianakaviana, na inona na inona ny fianakaviana seniority sy ny taona ny mpivady. Ny lehilahy, amin’ny ankapobeny, dia monogamous, dia mino marina sy mafy orina ny fitiavana ho an’ny fiainanao, ahoana no tsy mahalala ny zavatra toy izany ny lehilahy na vehivavy iray mahatsapa ny tenany ho tena vehivavy. Ka misokatra ny maimaim-poana ny Mampiaraka toerana ary aza matahotra ny hahazo nahalala ny teny portiogey. Ary mety hisy ny fanambadiana ny fahafahana Misafidy dia mahalala hoe aiza no hahitana ny Fiarahana amin’ny lehilahy mpanan-karena avy any Portiogaly. Eto dia iray amin’ireo tantara»Rehefa nihaona Manuel, rehefa nahita izany ny alalan’ izany maimaim-poana Mampiaraka toerana aho dia avy hatrany dia talanjona noho ny hery anaty, izy dia mangina akaiky aho, dia nahatsapa afa-tsy izy mba hijery. Ary tamin’izany andro izany dia tena maneho hatsaram-panahy amiko, tia vazivazy, handeha manodidina ny tanàna, dia nilaza ny tantara mahagaga. Namely ny toe-tsaina, ny vola toa tahaka ny ara-toekarena ihany fa tsy tia, tsy nahatsikaritra ny alahelo ny masoko rehefa nanao ny kely tsy caprices.
Manuela maro olom-pantatra sy ny namana, ny havana
Dia nandeha mba hitsidika azy, dia ireo tena nihaona am-pitiavana, fa tsy amin’ny fomba ofisialy, toy ny hoe izahay dia ny biby Fiompy.
Tsotra ny endri-javatra miavaka ny zavatra
Izy ireo ihany koa ny fitiavana ny mahandro sy ny voly ny namana amin’ny sakafo, dia hiaiky izy ireo dia tena matsiro izy ireo, misaotra anao, ny Mampiaraka toerana. Ary manambady ny anarana dia zavatra tsara, izany Fiarahana amin’ny namany sary, nanome ahy ny sarobidy fanompoana»Ary ireo tantara momba ny fifandraisana amin’ny teny portiogey ny olona ny zato. Betsaka ny vehivavy eto amin’izao tontolo izao te-hanao olom-pantatra amin’ny lehilahy manan-karena avy any Portiogaly. Te-hanampy aho fa ny zava-dehibe indrindra dia tsy mba manadino fa ho an’ny rehetra ny hatsaram-panahy, tsy ilaina ny»hipetraka azy ireo eo amin’ny vozony», ary koa ny mihevitra azy ireo amim-pitiavana
← Irery ny lehilahy, ny
Hihaona sy hanambady lehilahy Breziliana ho an'ny fifandraisana matotra soso-kevitra ho an'ny fanambadiana amin'ny hafa firenena →